गायक पशुपति शर्माको बचाउ गर्दै दिल निशानी मगर भन्छन्- ‘यो देशमा कान्छाहरुले लुटैलुट मच्चाए’ « Postpati – News For All
गायक पशुपति शर्माको बचाउ गर्दै दिल निशानी मगर भन्छन्- ‘यो देशमा कान्छाहरुले लुटैलुट मच्चाए’
फागुन ५, काठमान्डौ । चर्चित लोक गायक पशुपति शर्माको पक्षमा उभिएर लेखक दिल निशानी मगरले यो देशमा कान्छाहरुको लुटैलुट भएको दाबी गरेका छन् । पशुपति शर्माको गित ‘लुट्न सके लुट कान्छा’लाइ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रिको अपमान भएको भन्दै राजनतिक दवाबका कारण गायक शर्माले हटाउन बाध्य भएपछी निशानी मगरले एउटा स्थापित गायक सर्जकलाइ शब्द चयन गर्न सिकाउन नहुने जिकिर गर्दै उनका गितहरु सुन्न नपाइएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाइ शासन ब्यबस्था माथि प्रश्न गर्दै दिल निशानीले भनेका छन्, ‘संधैभरि उखान-टुक्का मात्रै सुनिदिनु पर्ने, यो कस्तो शासन हो ?’
देशमा लुटैलुट भएको बताउदै, ‘अख्तियारकै लाजनारायणले ३ करोड हसुरे । यो देशको माटोलाई निधारमा लगाएर कसम खानुहोस् मित्रहरु, यो देशमा लुट छ कि छैन? भन्दै गम्भीर प्रश्न सम्म गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको अपमान भएको टिप्पणीलाइ पनि लेखक मगरले खण्डन गरेका छन् । राष्ट्रपति संस्थाको सम्मान गरिने तर संस्थाको छाडापनलाइ भने सम्मान गर्न नसकिने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी कुनै भगवान बिष्णुको अबतार नभएको कटाक्ष गर्दै उनीपनि जनताको छोरी भएको बताएका छन् ।
दिल निशानीले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपती संस्थाको सम्मान गर्ने हो, तर संस्थाको छाडापनलाई जि,जि हजुर गर्न सकिन्न। ग्यानेन्द्रलाई मुर्ती चोर भनेकै हो। बिध्यादेवी भण्डारी भगवान बिष्णुको अवतार हैनिन्।’
राष्ट्रपति भण्डारीले पनि बिगतमा फाटेको साडी लगाएर शंखमूल चोक तिर उभिने जनताकी छोरी भएको बताएका छन् ।
कमरेडहरुको चाकमा अलिकती बोसो के लागेको थियो, एउटा स्थापित गायक-सर्जकलाई शब्द चयन गर्न सिकाई हाले। गित सुन्न पनि नपाईने, सधैभरी उखान-टुक्का मात्रै सुनिदिनु पर्ने। यो कस्तो शासन हो?
अख्तियारकै लाजनारायणले ३ करोड हसुरे। यो देशको माटोलाई निधारमा लगाएर कसम खानुहोस् मित्रहरु, यो देशमा लुट छ कि छैन? जहाँसम्म गितकै कारण राष्ट्रपती ज्यूको अपमान भयो भनिएको छ। राष्ट्रपती संस्थाको सम्मान गर्ने हो, तर संस्थाको छाडापनलाई जि,जि हजुर गर्न सकिन्न। ग्यानेन्द्रलाई मुर्ती चोर भनेकै हो। बिध्यादेवी भण्डारी भगवान बिष्णुको अवतार हैनिन्। केही बर्ष अगाडी सम्म फाटेको साडी लगाएर शंखमूल चोक तिर उभिने जनताकी छोरी हुन्।
पशुपति शर्मालाइ गित हटाउन दवाब आएपछि यस्तो बिज्ञप्ति जारि गर्दै शब्द हेरफेर गरि पुन ल्याउने बताएका छन् ।
हेर्नुहोस उनको बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ: